EA068 - Fampandrenesana OMG Bedwetting ho an'ny zaza / zaza / zaza / zokiolona - Vahaolana OMG
Mety mandiso fanantenana anao sy ny zanakao ny fandriana tongotra. Ny vahaolana marobe fandriam-pahalemana maro dia misy ao anatin'izany ny fanafody synthetic, ny fitsidihan'ny Dokotera lafo vidy sy ny fanairana amin'ny fandriana fandriana.
Ny fanairana hafa dia mifangaro, mahasosotra ny fiasan'ny ankizy iray, ary hiakiaka izy fa miady amin'ny fandriana ny fandriana ny zanakao. Ahoana raha toa ka misy vahaolana mahomby am-pandriana mahomby,
nampiasa metodolojika voaporofo ara-pitsaboana izy io ary nanana tantara mahomby 200,000+ hanohana azy? Alao an-tsaina ange ny fahatokisan-tenan'ny zanakao ary tsy dia tapaka ny alina.
Ao amin'ny 2 p3t (SS23D06G1. 5) switch toggle telo no mifehy ny toetran'ny vokatra: raha ny switch mankany afovoany, amin'ny fanjakana "OFF", kitiho ny vokatra arakaraka ny rafitra switch on A, ny vokatra dia tsy ny asa. Rehefa mifamadika amin'ny ankavian'ny vokatra ny tsindrio, tsindrio ny vokatra arakaraka ny switch an'ny rafitra, Feo buzzer, jiro manga manelatselatra, miaraka amina motera fa tsy vibration. Rehefa mikasika ny vokatra eo amin'ny ilany ankavanan'ny ny toggle switch, kitiho ny vokatra arakaraka ny rafitra switch amin'ny A, ny vokatra dia ao amin'ny fanjakana afaka miantso hovitrovitra motera (jiro manga hamirapiratra mitovy amin'ny feo sy maotera).
Fanamarihana: raha toa ka ny saram-pianakaviana, ny kodiarana arakaraka ny rafitra A dia tsy afaka miasa eo ambanin'ireo fitaovan'ny switch toggle telo, fa eo ambanin'ny fitaovan'ny switch toggle telo, dia afaka mandoa.
Bika Aman 'endrika: Ny endriky ny fo
Power: 600-800mAh / 3.7V azo famerenana
Rafitra fanairana: Fanairana + Fanairana
Diamondra Fuselage: 5cm
Halavan'ny fantsona fandefasana famantarana: 95cm
Volana Alarm: 50-82DB
Fiasa farany indrindra: 150MA
Mampiorina ny fahaizan'ny bateria lithium: 500mAh
Volavola bateria fanamboarana lithium: 3.7V
Faharetan'ny bateria: Eo ho eo. Hetsika 2
6514 Total Views 1 Views Today